कसरी फेसबुक पेज एक पृष्ठ बाट कदम बनाउने | ग्याजेट समाचार
फेसबुकमा पृष्ठ कसरी सिर्जना गर्ने
यद्यपि यसले विगतका महीनामा केही प्रासंगिकता गुमाइरहेको छ, फेसबुक अझै पनि विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको सामाजिक नेटवर्क हो। यो एक वेबसाइट र अनुप्रयोग हो जहाँ लाखौं मानिस उपस्थित छन्। यसको लागि धन्यबाद, तपाईं व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहन सक्नुहुनेछ वा सबै प्रकारका समाचारहरू र विभिन्न विषयहरूमा हालसालका मामिलाहरूको साथ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग सामाजिक नेटवर्कमा पृष्ठ सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ।
यहाँ पछ्याउनको लागि चरणहरू छन् यदि तपाईं फेसबुकमा पृष्ठ खोल्न चाहनुहुन्छ भने। हामी सामाजिक नेटवर्कमा पृष्ठ के हो र कसरी यो प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर पनि उल्लेख गर्दछौं। त्यहाँ रुचि भएका व्यक्ति हुन सक्ने सम्भावना छ।
1 फेसबुकमा पृष्ठ के हो?
2 कसरी फेसबुक पृष्ठ सिर्जना गर्ने: चरण-देखि-चरण
2.1 पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस्: पहिलो चरणहरू
2.2 तपाईंको फेसबुक पेज सेट अप गर्नुहोस्
2.3 पृष्ठ तथ्या .्क
फेसबुकमा पृष्ठ के हो?
सामाजिक नेटवर्कमा एक पृष्ठ एक प्रोफाइल जस्तै छ, हामी फेसबुक मा प्रयोग गरे जस्तै, तर यस अवस्थामा यो कम्पनी, वेबसाइट वा सार्वजनिक व्यक्तित्वबाट हो। यस पृष्ठमा तपाईं फोटोहरू, भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको अनुसरण गर्ने मानिसहरूसँग पोष्टहरू साझेदारी गर्नुहोस्। यो एक धेरै उपयोगी उपकरण हो जब यो आउँछ तपाइँको व्यापार, तपाइँको वेबसाइट वा तपाइँ एक कलाकार हो, प्रचार को लागी आफैलाई चिन्न र तपाइँको अनुयायीहरु संग सम्पर्क हुन।
यो एक धेरै रोचक प्लेटफर्म हुन सक्छ व्यापार, वा तपाईंको वेबसाइट वा ब्लग प्रचार गर्न। कलाकारहरूका लागि पनि विचार गर्नु राम्रो विकल्प हो। किनकि यसले तपाईंलाई तपाईंको अनुयायीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सम्भावना दिनेछ, साथै सबै घट्नाको बारेमा जानकारी दिनका साथै। तसर्थ, यदि तपाइँको वेबसाइट वा तपाइँको आफ्नै कम्पनी छ, फेसबुक पृष्ठ हुनु तपाइँको लागी रुचि हुन सक्छ।
व्यक्ति, तपाईंलाई पछ्याउनका साथै, टिप्पणी वा रेटिंग छोड्न सक्नुहुन्छ। यसैले, तपाईं एक कम्पनी वा विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्कमा पेशेवरको रूपमा तपाईंको सेवाहरूको लागि एक सकारात्मक प्रतिष्ठा उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। केहि चीज जसले तपाईंलाई सजिलैसँग बढी फलोअरहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
कसरी फेसबुक पृष्ठ सिर्जना गर्ने: चरण-देखि-चरण
एक पटक जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि सामाजिक नेटवर्कमा पृष्ठ के हो, र यसले हामीलाई प्रदान गर्न सक्ने केही फाइदाहरू, यो प्रक्रिया सुरू गर्ने समय हो। अन्य कार्यहरूको विपरीत कसरी भिडियो डाउनलोड गर्ने, आफ्नै फेसबुक हामीलाई आवश्यक उपकरण दिन्छ यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा।
यसैले हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको फेसबुकमा प्रवेश गर्नु हो, हाम्रो प्रोफाइलमा सामान्य रूपमा लग ईन गर्नु। एक पटक सामाजिक नेटवर्क भित्र, हामी स्क्रीनको माथि दायाँ तिर हेर्छौं। हामी देख्दछौं कि त्यहाँ एक आइरन डाउन एरो जस्तो आकारको छ। हामी यसमा क्लिक गर्दछौं र केहि विकल्पहरू देखा पर्नेछन्। पहिलो एउटा पृष्ठ बनाउनु हो। हामी त्यसपछि यसमा क्लिक गर्दछौं। प्रक्रिया अब सुरु हुन्छ।
पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस्: पहिलो चरणहरू
तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो हामीले चाहेको पृष्ठको प्रकार छान्नुहोस्। यो निर्भर गर्दछ कि तपाईं एक कम्पनी हो वा व्यावसायिक ब्रान्ड, वा यदि यसको विपरितमा तपाईं एक सार्वजनिक व्यक्तित्व वा समुदाय हुनुहुन्छ। तपाईंले सिर्जना गर्न लाग्नु भएको पृष्ठ प्रकारमा निर्भर गर्दै, तपाईंले यसको प्रकार चयन गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि, फेसबुकले हामीलाई यसको नामको लागि सोध्नेछ। हामीले पृष्ठलाई नाम दिनुपर्दछ, केहि जटिल छैन। यदि यो व्यवसाय हो भने, तपाईले यसलाई आफ्नो व्यवसायको नाम दिनुपर्दछ। यदि तपाईं कलाकार हुनुहुन्छ भने, पृष्ठलाई तपाईंको कलाकारको नाम दिनुहोस्। थप रूपमा, हामी यसको कोटी चयन गर्न सोधिने छौं। अर्को शब्दहरुमा, क्षेत्र जुन यो पृष्ठ सम्बन्धित छ। तपाईंको व्यवसायमा निर्भर गर्दै। यदि तपाईं स्टोर, कानून कार्यालय, कपडा ब्रान्ड, आदि हुनुहुन्छ भने।
जब हामी यी फिल्डहरू प्रविष्ट गर्दछौं, हामी अर्को दिन्छौं। केहि सेकेन्ड पछि, फेसबुक हामीलाई सोध्छ एक प्रोफाइल फोटो र एक कभर फोटो अपलोड गर्नुहोस् पृष्ठ को लागी। हामी दुबैको लागि हाम्रो कम्पनी लोगोको फोटो प्रयोग गर्न सक्दछौं, ताकि प्रयोगकर्ताहरूको लागि पहिचान गर्न सजिलो होस् जुन त्यो पृष्ठ सबै समयहरूमा आउँदछन्। कभर फोटो को ढाँचा केही जटिल छ, तर हामी यसलाई एक साधारण तरीकाले सामाजिक नेटवर्कमा समायोजित गर्न सक्दछौं।
फोटोहरू अपलोड भएपछि, फेसबुक प्रक्रिया समाप्त हुनेछ। हामीले पहिले नै सामाजिक नेटवर्कमा पृष्ठ बनाइसकेका छौं। अब, हामीले यसलाई कन्फिगर गर्नुपर्नेछ, ताकि यो आगन्तुकहरूको लागि तयार छ।
तपाईंको फेसबुक पेज सेट अप गर्नुहोस्
पृष्ठ भित्र, हामी स्क्रिनको माथि दायाँ तिर हेर्छौं, जहाँ हामी कन्फिगरेसन विकल्प फेला पार्दछौं। यसमा क्लिक गरेर, यसले हामीलाई पृष्ठमा लैजान्छ जस्तो तपाईले फोटोमा देख्नु भएको जस्तो छ। यहाँ हामीले स्क्रीनको बाँया पट्टि हेर्नुपर्नेछ। यो मेनू हो जुन यस पृष्ठका सबै पक्षहरू जुन हामीले सिर्जना गरेका छौं।
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो खण्ड भर्नुहोस् पृष्ठ जानकारी छ। यहाँ हामीले यो प्रोफाइल पूरा गर्नका लागि आवश्यक सबै जानकारी प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण हामीले वेबसाइट, पृष्ठको विवरण, उत्पादहरू हामीले बेच्ने घण्टा, ठेगाना, आदि प्रविष्ट गर्नुपर्दछ। सबै आवश्यक छ ताकि फेसबुकमा यो पृष्ठ प्रविष्ट गर्ने मानिसहरूलाई हामी के गर्छौं भन्ने बारे स्पष्ट विचार हुन्छ।
खातामा लिनको लागि अर्को खण्ड पृष्ठ भूमिका हो। तपाईंले पृष्ठ सिर्जना गरेको रूपमा, फेसबुक तपाईंलाई यसको प्रशासकको भूमिका प्रदान गर्दछ। तपाईं अन्य व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रित गर्न सक्नुहुनेछ, ताकि तिनीहरूले त्यसमा पोष्टहरू, फोटोहरू वा भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नेछन्, यसलाई अपडेट गर्ने जिम्मामा। यी व्यक्ति लेखक बन्नेछन्, तर तपाईं जहिले पनि प्रशासक रहनुहुनेछ, जबसम्म तपाईं अरू कसैलाई त्यो भूमिका दिनुहुन्न।
तपाईले पृष्ठ अपडेट गर्न सक्षम हुनुहुने छैन यदि यो प्रयोग गर्न यो राम्रो सेक्शन हो। यसैले, अर्को व्यक्तिको पहुँच हुनेछ, तपाईंको खाता प्रयोग नगरीकन।
पृष्ठ तथ्या .्क
एक उपकरण जुन तपाईंको फेसबुक पृष्ठको प्रयोगमा ठूलो सहयोगी हुनेछ, तथ्या .्क हुनेछ। पृष्ठमा, माथि, जहाँ हामी अघि कन्फिगरेसन प्रविष्ट गर्‍यौं, तपाईंले तथ्या .्क सेक्सन पाउनुहुनेछ। तिनीहरूलाई धन्यवाद, तपाईं पृष्ठ मा भ्रमण मा नियन्त्रण हुनेछ।
तिमिले देख्ननेछौ कतिजनाले यसलाई दैनिक भ्रमण गर्छन्, साप्ताहिक, मासिक र वार्षिक। यसले तपाईंलाई डाटा प्रदान गर्दछ जस्तै तपाईंको प्रकाशनहरूको क्षेत्र, पृष्ठमा मनपर्ने वा अनुयायीहरूको संख्याको विकास, डाटाको एक श्रृंखला जुन तपाईंलाई तपाईंको पृष्ठमा रहेको विकासको जाँच गर्न सक्षम हुन मद्दत पुर्‍याउँछ। सामाजिक सञ्जाल यसको सुरु भएदेखि नै हो।
यी पक्षहरूको साथ, हामीले फेसबुकमा पहिले नै हाम्रो पेज सिर्जना गरिसकेका छौं र हामीसँग यो ह्यान्डल गर्न सक्षम हुनको लागि हामी पहिले नै मुख्य चीज जान्दछौं। अब, हामी केवल पोस्ट अपलोड गर्न शुरू गर्नुपर्दछ र यसमा अनुयायीहरू प्राप्त गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सामाजिक नेटवर्क » फेसबुकमा पृष्ठ कसरी सिर्जना गर्ने
नमस्ते, मैले भर्खर एउटा फ्यान पृष्ठ सिर्जना गरेको छु र म यसलाई मेरो व्यक्तिगत खातामा समूहहरूमा लिंक गर्न सक्दिन। मैले धेरै भिडियोहरू हेरे तर मेरो पृष्ठले लिंक विकल्पहरू देखाउँदैन जुन मैले पाठ्य सामग्रीहरूमा देख्दछु।
GaNFast: द्रुत चार्ज चार्जरहरूको AUKEY को नयाँ दायरा
तपाइँ कसरी १०..10eयुरो बाट विन्डोज १० लाईसेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ